Hevitra MPANOHARIANA | Finoana
Toko 1 ka hatramin'ny 5 amin'ny bokin'i Enoka, nadika maika ho amin'ny teny malagasy.
2021-04-20 @ 21:30 in Finoana
Toko 1 : Faminaniana ny amin'ny Fitsarana Farany
1 Tenim-pitahiana ho an'ny voafidy sy ny marina hiaina amin'ny andro fahoriana. Hiakatra eo Sinay Andriamanitra, hipoitra eo afovoan'ny tafiny amin'ny heriny. Hangovitra ny rehetra, hihovitrovitra manontolo hatrany amin'ny faran'ny tany. Hihozongozona ny tendrombohitra, hietry ny havoana, hitsonika tahaka ny savoka anoloan'ny afo. Ho rovitra ny tany ary ringana avokoa izay eo ambonin'ny tany, dia ho avy ny fitsarana ny zavatra rehetra (indrindra fa ny marina). Homen'Andriamanitra fiadanana ny marina, ho ambenany, homeny famindram-po. Ho levona ny mpanota, hofaizina avokoa izay rehetra nofo, dia izay rehetra nanota.
Filaharana amin'ny famoronana
Hevero ny asa eny an-danitra: tsy miasy miala amin'ny lalany ny mpiteraka hazavana, voalahatra araka ny fotoany, ary tsy misy miala amin'ny filaharany. Jereo ny tany sy ny asa izay natao taminy, hatramin'ny fanombohany ka hatramin'ny farany, nahoana no tsy miova amin'ny fisehoany ny asan'Andriamanitra. Jereo ny fahavaratra sy ny ririnina, feno rano, rahona ando sy orana mipetraka aminy ny tany.
Jereo ny fipoiran'ny hazo rehetra, ny fahamainany sy ny fihintsanan'ny raviny, afatsy 14 izay tsy mety miala raviny fa mitahiry izany mandra-pisian'ny vaovao rehefa afaka ririnina roa na telo
Toko 4: ny hafanana: hevero ny androm-pahavaratra sy ny masoandro eo ambony: mitady aloka ianareo nefa na ny tany aza mandoro noho ny hafanana, ka tsy afa-mandeha amin'ny tany ianareo, na amin'ny vatolampy noho ny hafanana
Toko5 Fikorontanana sy fanasaziana ny mpanota
Hevero ny hamaitson'ny hazo izay mitondra voa, hevero sy fantaro ny nataon'ilay velona mandrakizay ho anareo, manao ahoana fanoavan'ny asany tsy miova, araka izay nanaovan'Andriamanitra azy. Jereo ihany koa ny ranomasina sy ny ony manatontosa ny asany. Fa ianareo tsy naharitra hatramin'ny farany, tsy nankatoavinareo ny didin'ny Tompo, nodikainareo izany ary nanompa ny halehibeny tamin'ny teny miavonavona sy mandratra ianareo, maina ny fonareo, ary tsy misy fiadanana ho anareo. Izany no mahatonga anareo hifahanompa isan'andro, ary very ny taona maro amin'ny androm-piainanareo, fa hitombo ho ao amin'ny ozona mandrakizay ny taom-pahaverezanareo. Amin'izany ny anaranareo ho atolotra hozonin'ny marina mandrakizay: dia hanozona anareo mandrakizay ireo, ianareo mpanota, miaraka amin'ny mpanota hafa. Fa ho an'ny voafidy ny fahazavana, ny fifaliana ary ny fiadanana, ary ry zareo no handova ny tany, fa ho anareo, mpanota, ozona. Ka omena ny voafidy ny fahendrena, ho velona daholo ireo, ary tsy hanota intsony na noho ny fanadinoana, na noho ny avonavona: fa ny hendry hanetry tena. Tsy hanota intsony ireo na hosaziana amin'ny androm-piainan'izy ireo; fa hamita ny isan'ny androm-piainany, hiroso ao anatin'ny fandriampahalemana ny fiainan-dry zareo, sy ny taom-pifaliana ao anatin'ny fanandratana sy ny fandriampahalemana mandrakizay, isan'andro amin'ny fiainany.
Ny nanaovana ny fandikana dia tato.
Mivavaha ho anay!
2015-12-17 @ 22:47 in Finoana
Mivavaha ho anay raha tsy ho afaka ny hamonjy fotoam-bavaka lehibe miaraka aminareo izahay. Mivavaha ho anay fa aza manenjika anay ho mpanota gaigilahy sy gaigivavy ka tsy mahalala mitondra ny vady aman-janakay any amin'ny toeram-pivavahana sy fankalazana an'Andriamanitra, tsy safidy ny anay fa an-tery nefa izahay tsy te-ho very, tsy te-ho tafasaraka amin'Andriamanitra, nefa toa mahatsiaro ho tsy finaritra. Toa tsy avela hiara-mifaly sy hiara-misakafo amin'ny fianakaviana intsony, toa tavela irery any lavidavitra any ho manimanina ny hira sy ny vavaky ny daholobe, toa tsy ho anay intsony ny hitondra ny ankizy hijery na hanao tsianjery sy ny kilalao any am-piangonana. Ny tena manahirana dia hotsaroan'ny zanakay fa tsy mba mety hiara-mifaly aminy izahay fa hoe sahirana miasa sy mitady vola. Nefa anie ka tsy fidiny ho anay izany. Tena very izahay eo anatrehan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Indrisy manko fa raha fantatra ho tahaka izao ve tany alohaloha tany dia mbola niroso ihany izahay? Izao ve no antsoina hoe lalan'ny fahaverezana?
Mivavaha ho anay ry zareo mba ho isan'ireo mpiandry ondry manirery tany an-tsaha, nisehoan'ny anjely koa izahay, nilazan'ny anjely fa teraka ny Mpamonjy ka mba ho afaka ny hifampitaona izahay hijery izany Mpamonjy teraka ho antsika ao antanànan'i Davida izany. Mivavaha ho anay fa toa tafavoaka ny vala izahay. Mivavaha ho anay fa aza manenjika anay. Mivavaha ho anay fa aza maneso anay. Mivavaha ho anay fa na mety hisy aza aminay no efa manadino an'Andriamanitra dia mbola mikaroka ihany koa ny fiadanana izahay, mikaroka ihany koa ny fitoniana izahay ary mikaroka ihany koa ny fifaliana iarahana amin'ireo olon-tiana dia ny vady aman-janaka, ny havana aman-tsakaiza. Mivavaha ho anay ary aza manadino anay. Manaova tonombavaka ho anay. Toa zary lasa vavaka asandratra ho anareo amin'izao sasakalina izao... Toa sasakalina santatra sahady amin'ilay sasakalin'ny krisimasy na noely.
Jentilisa 18 desambra 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Manaraka»